Ny aorian’ny #EndSARS: Ny fandraràna ny Twitter sy ny dikan’izany ho an’ny tanora Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Nampiasaina hampiroborobana ny fanohanana nandritra ny fihetsiketsehana 2020 ny bilaogy madinika
Voadika ny 06 Oktobra 2021 4:53 GMT
Mpanao fihetsiketsehana #EndSARS Lagos, Nigeria. Saripika navoaka ho an'ny Wikimedia commons avy amin'i Kaizenify, 13 Oktobra 2020 (CC BY-SA 4.0)
Tao ho ao izay ny tanora nizeriana nahita sy nanomboka nampiasa ny herin'ny media sosialy ahafahany manandratra ny feony hisian'ny fitantanam-panjakana tsara kokoa sy hamaranana ny tsy rariny iainan-dry zareo isan'andro.
Nanaporofo feno ny vaikan'ny media sosialy raha ampiasaina hanandratana ny feo ny hetsika nanerana ny firenena #EndSARS hanoherana ny herisetran'ny polisy, hetsika iray izay toy ny tadio tao amin'ny firenena tamin'ny volana Oktobra 2020. Hetsika iray notarihan'ny tanora ny #EndSARS, nateraky ny lahatsary iray nalaza haingana anjotra maneho tanoralahy iray nodarohan'ny polisin'ny SARS. Tamin'ny 8 oktobra no nanana ny heriny indrindra ny hetsika nanerana ny firenena, ary ireo izay tsy afa-nanatevin-daharana teny an-dalambe dia nanao ny hetsi-panoherana lehibe indrindra anjotra fantatr'io firenena io hatramin'izao.
Nandritra ny fihetsiketsehana ny Twitter no toeram-pihaonana virtoaly ho an'ny tanora. Tao no nanomanan-dry zareo ny hetsi-panoherana, nifampizarana vaovao, nanaovana fanairana sy namoahana ny fotoana tsara indrindra tamin'ny hetsika. Tao ihany koa ry zareo no nifampahery, namahana angovo ny hafa sy nanasongadina ny maha-zavadehibe ny miray hina sy marina amin'ny tanjon'ny hetsika.
Hatramin'izay fotoana izay, niharihary fa nandany hery ny governemanta nizeriana hanesorana izay voaporofo fa fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra amin'ny tanora. Samy manana ny tanjany avokoa ny sehatra media sosialy rehetra, fa ny Twitter no mitroka azy rehetra raha eo amin'ny fanampiana tanora nizeriana hahomby amin'ny fikatrohana anjotra no resahina. Ny fahafahan-dry zareo manova sy mifehy ny fitantarana amin'ny alalan'ny fampiasa tokana, misioka fotsiny, no zavatra mbola tsy hitan'ny governemanta Nizeriana mihitsy taloha.
Tsy azon'ny governemanta ahodikodina ny Twitter. Tsy voafehin-dry zareo araka ny fomba fifehezan-dry zareo ny fampitam-baovao mahazatra hatramin'izay izy io, ka miteraka olana goavana ho an'ny fanjakana izany. Tsy atao mahagaga noho izany raha nandray fepetra amin'ny heveriny ho fandrahonana goavana indrindra amin'ny fisian'i Nizeria — ny Twitter — ny governemanta.
Vakio bebe kokoa: Social media became a life-saving tool for Nigerians. Now, they have to fight for it
Ny fandraràna ny Twitter, izay nihatra tamin'ny ora voalohany tamin'ny sabotsy 5 jona no ezaka farany indrindra nataon'ny governemanta hampanginana ny feo miha-miraondraona eo amin'ny tanora nizeriana. Naatony izany tsy noho ny namafan'ny sehatra ny siokan'ny Filoha Muhammadu Buhari ihany, izay nandika ny fitsipika, fa heverina ho valibontan'izay nanjaka tamin'ny oktobra 2020 sy izay rehetra nanaraka izany. Rehefa nihevitra ny minisitry ny filazam-baovao ao Nigeria, Lai Mohammed, ny fampiasana ny sehatra ho “fandrahonana ny filaminam-pirenena,” afaka misaina ny tsirairay fa ny hetsika #EndSARS izany karazana hetsika lazain'izany fanambaràna izany.
Tsy araka ny lalampanorenana izany fampiatoana tsy manam-pahataperana izany, ary fanitsakitsahana mivantana ny zo ankihy sy zon'olombelon'ny tanora Nizeriana. Raha tsy azon-dry zareo idirana mihitsy ny fampiasa, dia hisy fiantraikany mafy tsy ho an'ireo izay miankina amin'ilay sehatra ho loharanom-pivelomana, fa ho an'ireo izay mampiasa azy ihany koa hisoloam-bava anoherana ny tsy rariny sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Mpiserasera isan-karazany no nanandratra ny feony ho fanoherana ao amin'ny Twitter, ao amin'ny farangoteny #KeepitOn natolotry ny sehatra:
Modupe “Moe” Odele mampahatsiahy ny nahafahan-dry zareo mametraka fanampiana ara-pitsarana ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina:
Nanomana fanampiana ara-pitsarana ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana milamina nosamborina manerana ny firenena amin'ny fampiasana ny Twitter izahay. Tonga ao amin'ny tobin'ny polisy ao anatin'ny 20 minitra nisian'ny fisamborana ny mpisolovava. Ilaina ity sehatra ity. #KeepitOn
Ninainaina i Rene amin'ny fiantraika miiba ny fandraràna amin'ny asany sy ny fahafaha-manandra-teny:
Ny fanasoavako, ny fihariako ary ny fahombiazako dia avy amin'ny twitter ny ankamaroany. Niantraika amin'ny fiainako amin'ny lafiny maro tokoa izany. Hitako ny fiovan'ny fiainana isan'andro. Tsy miraharaha ahy na ireo olona an-tapitrisany miankina amin'ity sehatra ity ny governemantako. Ratsy fanahy. #KeepitOn
Naverin'ity mpisera Twitter ihany koa ny kiakia-pahatrotrahana tahaka izany:
Eto Nigeria, Twiiter no 911-nay, ity no fanangonam-batsim-piarahamoninay, ny sehatra e-varotra, ny fanamarinana zavamisy ary ny fitaovana CRM voalohany ho an'ny ankamaroan'ny orinasa. Ity no loharanom-bolan'ny olona sasany. Raha tsy afa-manome sakafo ny Nizeriana ny governemanta, dia tsy tokony alain-dry zareo ny vilianay
Vakio bebe kokoa: #KeepItOn: How the Twitter ban is affecting young Nigerians
Amin'izao fotoana izao moa ny mpiserasera mbola afa-miditra amin'ny sehatra amin'ny alalan'ny VPN saingy efa nanambara ny fikasany hiady amin'ny mbola ampiasana ny Twitter ny governemanta aorian'ny fandraràna amin'ny alalan'ny fanomezana baiko itsarana ireo mbola mampiasa ny fampiasa. Na izany aza, mifanohitra amin'ny lalampanorenana izany atsy ampy hampiala ny mpisera Twitter.
Efa volana maro izay no lasa hatramin'ny nisian'ny fandraràna, ary na dia tsy nisy fisamborana natao sy mbola afaka miditra ao amin'ny sehatra amin'ny alalan'ny VPN aza ny mpiserasera, mbola hita fa manjavozavo ny toe-draharaha satria sarotra no hilaza hoe mandra-pahoviana no haharitra ity fandraràna ity.
Na izany aza, misy ny tsirim-panantenana.
Nanomboka ny fifampiraharahana teo amin'ny Twitter sy ny governemanta Nizeriana, raha ny vaovao navoakan'i Segun Adeyemi, mpanampy manokana ny filoham-pirenena tamin'ny haino aman-jery tamin'ny 22 jona. Nanambara ny fikasany hifampiraharaha amin'ny governemanta Nizeriana ny Twitter tamin'ny 11 Jona mba hijerena raha afaka tonga amin'ny fifanarahana izay mety hitarika ny famerenana ny tolotra Twitter amin'ny laoniny any Nizeria. Notontosain'ny ekipa minisitra notarihin'i Lai Mohammed ny fifampiraharahana.
Tamin'ny tapaky ny volana septambra, nanambara ny governemanta Nizeriana fa hamerina amin'ny laoniny ny Twitter “afaka andro vitsivitsy.” Na izany aza, tsy nisy zava-nitranga nanomboka tamin'izay, ary mbola voaràra ao amin'ny firenena be mponina indrindra ao Afrika ny Twitter.
Na eo aza izany, mitoetra ny fanontaniana raha misy ny fifanarahana mitombina azo raisina avy amin'ny governemanta vonona hampangina izay tsy mitovy hevitra aminy rehetra.
Anisan'ny andian-dahatsoratra manadihady momba ny fiarovana anjotra taloha sy ankehitriny momba ny fangaraharana, ny tamberina andraikitra ary ny fahaiza-mitantana avy amin'ny tanora Nizeriana ity lahatsoratra ity. Ampahany tamin'ny taranja fifandraisana ankihy ho an'ny mpianatra taona faharoa amin'ny BSc ao amin'ny Mass Communication, School of Media and Communication (SMC), Pan Atlantic University, Lagos, Nigeria ity tetikasa fanoratana ity